Dhaloota Haaraan Aadaa Keenya Baru Qaba ! VOASites by Language
Kamisa, Guraandhalaa 11, 2016 Local time: 09:24
Dhaloota Haaraan Aadaa Keenya Baru Qaba ! Print
Kitaabni haaraan Afaan Oromoon barreeffame kan “ Quba Qabduu Laataa ? “ jedhu dhiyeenya kana gabaa irra oolee jira.
Kitaabni kun waa’ee Aadaa fuudhaa fi heerumaa, Baacoo, Oduu durii ykn sheekkoo, makmaaksa, Eebba, Walaloo, Geerarsaa fi Hibboo of keessaa qaba. Biyya baqatummaan keessa jiran Ugaandaa irraa kitaaba kana kan barreessan Obbo Laggasaa Fiqaaduu Fiixee, Aadaan durii dagatamee akka hin hafne akkasumas dhaloota haaraatti akka darbu gochuuf yaadeen barreesse jedhan. Biyya ofii keessa jiraannee barreesuuf carraa dhabnuu iyyuu, waan dur beeknu galmeessinee kaa’uun dirqama keenya jedhu Obbo Laggasaan. Gutummaa Gaaffii fi Deebii kanaa MP3 tuquun dhaggefadhaa.